Iska Illow Kante, Jorginho, Lukaku & Difaacyahannada! Xiddiga Aanu Thomas Tuchel Fadhin Karin Oo La Magacaabay - GOOL24.NET
Iska Illow Kante, Jorginho, Lukaku & Difaacyahannada! Xiddiga Aanu Thomas Tuchel Fadhin Karin Oo La Magacaabay
Tababaraha Chelsea ee Thomas Tuchel marnaba ma fadhiisin karo xiddig ka tirsan kooxdiisa sababtoo ah, saamaynta uu ciyaartoygani ku leeyahay garoonka dhexdiisa iyo qolka labbiska intaba.
Ma aha N’Golo Kante oo waxqabadkiisa aan marnaba daah la saari karin, waxaanay kooxdu hore u muujisay inay si fiican u ciyaari karayso iyadoo aanu ku jirin kubbad-burburiyahan reer France oo kulamo badan ku seegay dhaawacyo xilli ciyaareedkan socda.
Chelsea ayaa Sabtida la ciyaari doonta Manchester City oo ay ugu tegi doono Etihad Stadium, iyadoo waliba toban dhibcood ka dambaysa, waxaana Thomas Tuchel uu u baahan yahay inuu guul ka keeno ciyaartan si uu usoo yareeyo farqiga dhibcaha ee laga horreeyo.
Man City ayaa iyaduna u dagaallamaysa inay 13 dhibcood ku qabato hoggaanka, isla markaana ay saddexda dhibcood ka xoogsato kooxdan Champions League kaga guuleysatay xilli ciyaareedkii hore.
Ciyaartan ayaa ugu soo beegmaysa Chelsea iyadoo barbarro gashay afar ka mid ah shantii kulan ee ugu dambeeyey ee horyaalka Premier League, waxaana siddeedaas dhibcood ee ay lumiyeen ay Man City siiyeen fursadda ay kaga baxsatay.
Halyeygii Arsenal ee Ian Wright oo ka hadlay ciyaartan ayaa rumaysan in Chelsea ay haysato fursad weyn oo ay ku garaaci karto Manchester City haddii uu bandhig fiican sameeyo N’Golo Kante, laakiin waxa uu sidoo kale xusay inuu jiro ciyaartoy kale oo kasii muhiimsan oo aanu Tuchel marnaba kaydka gelin karin.
“Chelsea si fudud ayay u garaaci karaysaa Manchester City sababtoo ah waxay haystaan Kante oo ciyaarta burburin karaya, sidoo kalena ku fiican inuu baas fiican afka hore gaadhsiiyo.
“Ciyaartoy si aan la rumaysan karin u akhriya ciyaarta, ganayana halka khatartu kaga imanayso. Waa ciyaartoy cajiib ah, sidaa darteed ayay dadku uga fikiraan halka uu ugu fiican yahay.
“Maurizio Sarri ayaa isku dayay, Frank Lampard ayaa isku dayay. Waxay doonayeen inay hore usii riixaan, sababtoo ah heerka ay gaadhsiisan tahay ciyaartiisu, sida uu ugu fiican yahay la orodka kubadda, baaska halka taabasho ah, dhalinta, waxay isku dayeen inay dhexda hore ka ciyaarsiiyaan.
“Bandhiggaas oo kale ayuu doonayaa inuu sameeyo kulanka Man City, haddii uu si fiican u ciyaarana waxay Chelsea haysataa fursad aan la rumaysan karin oo ay ku garaacaan Man City.”
Ian Wright waxa uu intaa kaddib magacaabay xiddiga aanu marnaba fadhiisin karin Thomas Tuchel, waxaanu yidhi: “Marka aad eegto boosaska uu ka ciyaarayo inta ciyaarsu socoto iyo dhaqaaqiisa, waxa uu mar walba imanayaa xerada ganaaxa. Markaa waxay ila tahay in aanu marnaba fadhiisin karayn Mason Mount, waana inuu kusoo bilaabo ciyaarta.”
Mason Mount ayaa waxa uu xilli ciyaareedkan ku lug yeeshay 14 gool oo ay dhalisay kooxdiisu.